Sidee socdaalka RW Rooble looga dareemay Gedo? | KEYDMEDIA ONLINE
29 November 2021 Muxuu Rooble kala hadlay Guddiyada Doorashooyinka?
Reer Gedo waxay heleen wixii ay u dagaalamayeen dhowrkii sano ee lasoo dhaafay, oo ah in xaqooda matelaadda Baarlamaanka ay iyagu go'aan ka gaaraan.
GARBAHAAREY, Soomaaliya - Waxaa Maanta magaaladda Garbahaarey gaarey wafdi uu hogaaminayo Ra'iisul Wasaare Rooble, oo kasoo duulay Kismaayo oo labadii maalmood ee lasoo dhaafay uu ku sugnaa.
Soo dhaweyn diiran ayay shacabka iyo mas'uuliyiinta u sameeyeen Rooble, oo noqonaya mas'uulkii ugu sareeyay oo ka socda dowladda oo booqda magaaladda oo mudo dheer ay ka jirtay cabasho dadka degaanka ay ka qabeen Jubbaland.
Ujeedka socdaalka Rooble waa dib u heshiisiin iyo inuu qanciyo reer Gedo, oo aad uga tabanayay Axmed Madoobe oo doonayay inuu boobo kuraastooda Baarlamaanka soo socda, oo lagu dooranayo Garbahaarey.
Waxuu Rooble la kulmaya mas'uuliyiinta Maamulka gobolka iyo kan degmada, iyo sidoo kale Odayaasha dhaqanka iyo bulshadda, si uu usoo afjaro arrimaha dib u heshiisinta iyo maamul dhisida kahor doorashadda billaabanaysa 25-ka bishan.
Dareenka reer Gedo ayaa ahaa Maanta mid ka duwan sidii hore, waxaana u muuqda inay heleen cadaalad iyo matelaad wanaagsan, maadaama horey maamulkooda looga keeni karay dusha, oo Kismaayo uu Axmed Madoobe kasoo magacaabayay.
Shacabka ayaa hadda go'aan ka gaaraya cida gudoomiye ku noqonaysa Garbahaarey iyo ku xigeenada, waxaana arintan ay qeyb ka tahay heshiiskii 27-kii bishii May 2021 lagu gaarey magaaladda Muqdisho.
0 Comments Topics: gedo soomaaliya
Yaasiin Fareey, Kulane Jiis Mariixaan iyo Fahad Yaasiin ayaa ah ragga ugu waaweyn ee la tuhmaya inay dileen Ikraan Tahliil Faarax.
Amniga Muqdisho oo faraha ka baxay iyo DF oo shaqada joojisay
Warar 21 November 2021 5:34
Warar 30 November 2021 9:23
Kusiga HOP067, waxaa tartamayashiisa ka mid ah Cabdiraxmaan Maxamuud Turyare, waxaana Baarlamaankii 10-aad, ku fadhiyay, Cabdullahi Cali Axmed [CADDOW CALI GEES].